Ividiyo entsha yeHuawei Mate 20 ivuliwe | I-Androidsis
Kwiiveki ezimbalwa, isiphelo esitsha esiphakamileyo sikaHuawei siza kuboniswa ngokusemthethweni. Uluhlu apho siza kufumana khona iHuawei Mate 20. Kwiiveki ezidlulileyo, ifowuni ibisisifundo sokuvuza okuninzi. Ke sinombono ocacileyo malunga nayo. Kodwa kwiiyure zokugqibela ividiyo entsha ivuza, okusishiya sinemimangaliso.
Kuba kubonakala ngathi isikrini siza kuba yinto eyahlukileyo kunaleyo besicinga ngayo kwimodeli. I-Huawei Mate 20 kulindeleke ukuba ibe nescreen se-6,3-intshi nge-18: 9 ratio. Kodwa kwividiyo inika imvakalelo yokwahluka.
Kule vidiyo sinokubona yonke ifowuni, ngaphambili nangasemva kwayo. Kucacile kuthi kuthi uyilo oluya kuba nalo olu luphezulu. Emuva sifumana iikhamera ezintathu kunye nesibane se-LED, ezilungiselelwe ngohlobo lwesikwere.
Isikrini yile nto ivelise uninzi lwezimvo kule vidiyo yeHuawei Mate 20. Ukusukela Inika imvakalelo yokuba mdala kunaleyo sele ivuza ngoku. Njengoko besitshilo, bekukho intetho yescreen se-6,3-intshi. Kodwa inyani kukuba kubonakala ngathi inkulu.
Ngesi sizathu, kusithiwa inokuba ngumnxeba Isikrini sayo sisondele kwii-intshi ezi-7 ngobukhulu. Nangona olu luqikelelo olusekwe kule vidiyo yeHuawei Mate 20. Okwangoku asinazo iinkcukacha ezithile malunga nobungakanani bekhusi lesixhobo.
Siyathemba ukuba iinkcukacha ezithe kratya malunga neHuawei Mate 20 ziza kufika kungekudala. Isiphelo esitsha esiphakamileyo somenzi waseTshayina siboniswe phakathi ku-Okthobha eLondon. Banayo yonke into ukuba ibe yenye yezona ndawo zithengiswa kakhulu kwezi nyanga zidlulileyo zonyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Ukucoca ividiyo entsha yeHuawei Mate 20